Taliska Ciidanka Xooga Dalka Oo Gacanta Kusoo Dhigay Koox Isbaaro U Taalay – Hornafrik Media Network
Taliska Ciidanka Xooga Dalka Oo Gacanta Kusoo Dhigay Koox Isbaaro U Taalay
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jan. C/llaahi Cali Caanood oo warfidiyeenka kula hadlay goobta raggan lagu soo bandhigay ayaa sheegay in howlgalka uu qeyb ka yahay amarkii Madaxweynaha ee ahaa in lala dagaalamo ragga caadeystay iney jidgooyooyinka dhigtaan waddooyinka.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa burcad kasta oo hubeysan ama magac ciidan ha wadato ama magac kale ha watee inaan loo saamaxeynin in dib dambe shacabka Soomaaliyeed u dhibaateyso” ayuu yiri abaanduulaha ciidanka xooga dalka.
Sidoo kale, howlgalo lagula dagaalamayay burcadda dhigata isbaarooyinka ee laga sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe ayaa lagu diley afar kamid ah burcaddaas oo hubeysann.
“Afar casho ka horna gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan degmada Cadale, waxaan ku dilney afar nin oo burcad ah oo hubeysan oo ay la dagaalamay ciidamadii” ayuu markale sheegay abaanduulaha.
Jan. C/llaahi Cali Caanood abaanduulaha ciidanka xooga dalka ayaa sidoo kale waxaa uu intaa ku daray in howlgalka lagu diley afarta burcadda ah ay sidoo kale goobta ka baxsadeen 12 nin oo kale kuwaas oo hadda ku dhuumaaleysanaya dhulka howdka ah.
Deg Deg Heegan Lagaliyay Ciidanka Amaanka Ee Magaaladda Muqdisho